Samsung Galaxy Note 8 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး | Androidsis
Samsung Galaxy Note 8 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး
နောက်ဆုံးတော့စောင့်ဆိုင်းမှုအဆုံးသတ်သွားပြီ။ မျှော်လင့်ပါသည် Samsung Galaxy Note 8 တရားဝင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှတရားဝင်တင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းသည်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်စာရွက်တစ်ခုထက်မကကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစိတ်ကူးရရှိရန်မှာမျှတသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီ post မှာကျနော်တို့ကိုတိတိကျကျ၊ ဖြိုဖျက်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သွားမှာပါ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Samsung Galaxy Note 8 အသစ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်အာရုံဇယားတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်း။ ဒါကြောင့်သင်ဆန္ဒရှိတဲ့စာရင်းမှာသင်ရေးထားတဲ့အရာအားလုံးတကယ်ပါမပါစစ်ဆေးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာသူမှာပစ္စည်းအတော်များများမပြည့်စုံဘူး၊ ဒါက plug ကိုမသွားဘဲကြာရှည်ခံဖို့ခွင့်ပြုထားတယ် (အခမဲ့အိပ်မက်မက်နေတယ်) ။
ပုံစံ Galaxy Note ကို 8
operating system အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Nougat
ဖန်သားပြင် ၆.၃ လက်မ - Quad HD - Super AMOLED Infinity
resolution ကို X ကို 2960 1440
တစ်လက်မလျှင် Pixel သိပ်သည်းဆ 521 ppi
ရှုထောင့်အချိုး 18.5: 9
Processor ကို ကျန် Qualcomm Snapdragon 835 တွင် 64-bit core ရှစ်ခု (၄. ၂.၃၅ GHz + ၄.၉ G 2.35. GHz တွင် ၄) နှင့် 1.9-bit cores ရှစ်ခု (၂.၃ HGz + ၄ တွင် ၁.၇ GHz တွင် ၄) ကမ္ဘာကြီး
GPU ကို Adreno 540 သို့မဟုတ် Mali-G71 MP20
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64GB / 128GB / 256GB ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်မည့် microSD memory card slot မှအပို ၂၅၆GB အထိရနိုင်သည်
အဓိကအခန်း Dual - 12 MPX အကျယ်ထောင့် Dual Pixel autofocusf/ 1.7 aperture နှင့် OIS တည်ငြိမ်မှု + 12 MPXf/ 2.4 aperture autofocus နှင့် OIS တည်ငြိမ်သောဖုန်း
ရှေ့ကင်မရာ autofocus နှင့်f/ 8 aperture ပါသော 1.7 MPX
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11a/b/ g / n / ac 2.4 / 5GHz - USB Type-C - NFC - Nano SIM
အာရုံခံကိရိယာ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ / အရှိန်လျှော့မီတာ / gyroscope / မြန်သောအားသွင်းစနစ် / ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း / ဘားမီတာ / ဂျီသြမေတြီအာရုံခံကိရိယာ / နှလုံးအာရုံခံကိရိယာ / အနီးကပ်အာရုံခံကိရိယာ / ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာ / အိုင်းရစ်အာရုံခံကိရိယာ / ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ
ရှုထောင့် 165.5x 74.8 x ကို 8.6mm
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy Note 8 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး
Galaxy Note 8 နှင့် Galaxy S8 Plus
Samsung Gear Fit2Pro ကို Samsung Spain ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်စစ်ထုတ်သည်